फोटोशप बनावट: जहाँ तिनीहरूलाई डाउनलोड र गुणवत्ताको बनाउन क्रिएटिव अनलाइन
एनकर्नी आर्कोया | 17/06/2021 08:12 | बनावट
एक डिजाइनर हामीलाई थाहा छ कि यसको प्रयोग फोटोशप बनावट यो आवश्यक कुरा हो। यी छविहरु लाई एक यथार्थवाद र एक प्राकृतिकता प्रदान गर्दछ जसले तिनीहरूलाई हेर्नेहरुको ध्यान आकर्शित गर्दछ, र यो लेखकले खोजिरहेको कुरा हो।
यथार्थताको संवेदनाहरू सिर्जना गर्ने, जस्तो कि छविलाई छोइन्छ, मानौं कुनै फोटोको रूखापन वा कोमलता याद गरिएको छ डिजाइनरका केही उद्देश्यहरू, र यसलाई प्राप्त गर्न, बनावट धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तर, यदि तपाईं तिनीहरूलाई आफैं स्क्र्याचबाट सिर्जना गर्न चाहनुहुन्न, वा तपाईंको ग्राफिक प्रोजेक्टहरूको लागि तपाईंसँग ठूलो विविधता हुनु आवश्यक छ भने, हामी यहाँ वेबसाइटहरू कुरा गर्न जाँदैछौं जहाँ तपाईं सक्नुहुन्छ फोटोशप बनावट डाउनलोड गर्नुहोस्।
1 फोटोशप बनावट के हो?
1.1 बनावटका प्रकारहरू
1.2 फोटोशपमा टेक्सचर कसरी थप्ने
2 फोटोशप बनावट कहाँ पाउने
2.3 नि: शुल्क शेयर बनावट
2.5 CGTextures / बनावट
2.6 म्याangको नि: शुल्क बनावट
2.7 फोटोशप बनावट: एरोवे टेक्स्चर
फोटोशप बनावट के हो?
यदि हामी डिजिटल फोटोग्राफीको शब्दमा कुरा गर्छौं भने, फोटोशप बनावटलाई तहहरूको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ जुन सम्पादन कार्यक्रमको माध्यमबाट फोटोमा थपिएका छन् र त्योसँग सतह जुन एक बनावट अनुकरण गर्दछ। त्यो हो, कागज, काठ, दाग, आदि। केहि पनि छ कि छवि एक यथार्थवाद दिन्छ।
टेक्स्चर प्राप्त गर्न तपाईले चाहानु भएको फोटो फोटो गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई स्क्यान गर्न वा फोटोशपमा आफ्नै बनावट पनि सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।
बनावट प्रयोगको कारण त्यो छविलाई गहिराइ र भावनाको स्तर दिनु हो। अर्को शब्दमा, यो छविसँग हेर्ने प्रयोगकर्ताहरूसँग जोड्ने कुरा हो, यसले भावनाहरू उत्पन्न हुन्छ। तसर्थ, यस प्रविधिको साथको छविमा यसलाई राम्रो देखिने बनाउन धेरै काम गर्दछ, यो यथार्थ हो कि यसलाई यथार्थवादको एक तह दिइन्छ जुन धेरै राम्ररी राख्नुपर्दछ ताकि यो याद नहोस्।
तपाईलाई थाहा हुनुपर्दछ कि त्यहाँ कुनै प्रकारको बनावट छैन। त्यहाँ छनौट गर्न वास्तवमा धेरै छन्। यो प्रभाव तपाईं प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ मा निर्भर गर्दछ। त्यसो भए, उदाहरणको लागि, तपाईं भेट्न सक्नुहुन्छ:
प्राकृतिक बनावट। तिनीहरू ती हुन् जसले इन्द्रियसँग सम्बन्धित परिणाम खोज्छन्: गन्ध, दृश्य, स्वाद, स्पर्श ... उदाहरणका लागि, रूखको बोक्रा, समुद्रका छालहरू, बतास ...
थ्रीडी बनावट। तिनीहरू छविमा गहिराई र भोल्यूम दिएर यसरी चित्रण गर्दछन् कि यो २ डीबाट बाहिर देखिएजस्तो देखिन्छ।
कल्पनाको। काल्पनिक बनावटले रहस्यमय विवरणहरूको साथमा एक छवि जादू दिन प्रयास गर्दछ, अवास्तविक तर त्यसले अन्तमा छविलाई आफैंमा कल्पनामा परिवर्तन गर्दछ।
दाग स्पटको बनावटले दिन प्रतिदिन यथार्थवाद प्राप्त गर्न कोसिस गर्दछ। उदाहरणहरू कफी कपमा ड्रप, शावर स्क्रिन वा पर्दामा ड्रप, वा कलमबाट रगत वा मसी पनि हुन सक्छ।
कपडा बनावट। रिडन्डन्सी बिर्सनुहोस्, कपडाले उनीहरूले बनाइएका सामग्रीहरूको अनुकरण गर्न खोज्दछन्, रेशम, मखमल, ऊन जस्ता अति नै "कुनै न कुनै" मा।
फोटोशपमा टेक्सचर कसरी थप्ने
कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंले आफूले खोज्नु भएको बनावट भेट्टाउनु भएको छ र यसलाई तपाईं आफ्नै परियोजनाको लागि प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ। जहाँसम्म, यदि तपाइँ एक शुरुआती हुनुहुन्छ र पहिले कहिले पनि गर्नुभएको छैन भने, यो गाह्रो हुन सक्छ।
यसैले हामी यहाँ तिमीलाई छोडछौं फोटोशपमा टेक्स्चर राख्नको लागि तपाईंले लिनु पर्ने चरणहरू। त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन्, तर हामी यहाँ तपाईंलाई सब भन्दा सरल दिन्छौं।
फोटोशप र आफ्नो छवि खोल्नुहोस्, तपाईंले छनौट बनावट थपको साथ र तपाईं त्यो फोटो चाहानुहुन्छ।
बनावटमा जानुहोस् र छवि / समायोजन / बेवास्ता क्लिक गर्नुहोस्। यसले बनावटबाट र remove हटाउँछ, किनकि हामीलाई प्राय जसो केसहरूमा वास्तवमै यसलाई आवश्यक पर्दैन।
त्यो छवि तपाईंकोमा दिनुहोस्। यस तरीकाले, तपाइँको परियोजना संस्करणमा नयाँ लेयर सिर्जना हुनेछ।
तहको ब्लेन्डिंग मोडलाई 'ओभरले' मा परिवर्तन गर्नुहोस् र अस्पष्टता, तीव्रता, चमक परिवर्तन गर्नुहोस् ... तपाईं आफूले खोज्नु भएको परिणाम प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
फोटोशप बनावट कहाँ पाउने
हामीलाई थाहा छ कि तपाईंको लागि सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जान्नु हो वेबसाइटहरु जहाँ फोटोशप बनावट को लागी, हामीले केहि साइटहरू कम्पाइल गरेका छौं जहाँ तपाईं बनावटहरू पाउनुहुनेछ। सामान्यतया तपाईं कुनै पनि छवि बैंकमा पाउन सक्नुहुनेछ, दुवै भुक्तान गरिएको र नि: शुल्क, तर केहि वेबसाइटहरूमा उनीहरूसँग बढी छ। के तपाई कहाँ जान्न चाहानुहुन्छ?
यो पृष्ठ राम्रोसँग परिचित छ किनकि यो त्यहाँ सबैभन्दा ठूलो छवि बै of्कहरू मध्ये एक हो। अब, योसँग त्यत्ति धेरै फोटोहरू छैन, तर यसमा भेक्टरहरू र त्यस्तै छविहरू छन्।
र, होनि, यसको पनि धेरै फरक बनावट छ। तिनीहरू मध्ये धेरैले तपाईंलाई PSD फाईल डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ, तिनीहरूलाई काम गर्न र परिमार्जन गर्न सजिलो बनाउँदै।
यो वेबसाइट, यसको नामले सुझाव दिए जस्तै वेब पृष्ठभूमि,3डी मोडेलिंग, र हो, बनावटमा आधारित छ। यसमा तपाईले फराकिलो क्याटलग पाउनुहुनेछ र तिनीहरूको फाइदा छ कि ती दुवै व्यक्तिगत प्रयोग र व्यावसायिक प्रयोगको लागि हुन सक्छन्।
नि: शुल्क शेयर बनावट
एक वेबसाइट बनावट को लागी समर्पित? ठिक छ, यो तिनीहरू मध्ये एक हो। अब, तपाईले सबै शैलीहरू फेला पार्नुहुने छैन, तर यो प्राकृतिक बनावट वा भत्केको पर्खालमा विशेषज्ञ छ।
योसँग ग्रन्ज टेक्स्चरको लागि विशेष सेक्शन पनि छ यदि तिनीहरू तपाईं खोज्दै हुनुहुन्छ भने।
यहाँ, यद्यपि तपाईं केहि नि: शुल्क गहनाहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ, प्राय: ती सबैलाई व्यापारिक प्रयोगको लागि तिर्नु पर्छ। तर सत्य यो हो कि तिनीहरू मध्ये धेरै तिनीहरू हासिल गरेको फिजुलका लागि र उनीहरूले बनाएको क्वालिटीका लागि लायक छन्।
साथै, यो जहाँ तपाईं एक फेला पार्न सक्नुहुन्छ विशेष बनावट को विविधता, ती प्राप्त गर्न वा आफैलाई बनाउन गाह्रो हुन्छन्।
CGTextures / बनावट
यस अवस्थामा यो एक हो फोटोशप बनावट वेबसाइटहरू जहाँ तपाईं उदाहरणको एक ठूलो संख्या फेला पार्नुहुनेछ, दुबै कोटी र आकार द्वारा व्यवस्थित। यो त्यहाँ उत्तम छ र सत्य यो हो कि सबै को धेरै राम्रो गुण छ। अवश्य पनि, केही डाउनलोड गर्न तपाईंसँग नि: शुल्क खाता हुनुपर्दछ, र यदि छविहरू विशाल छन् भने, तपाईंलाई प्रीमियम खाता चाहिन्छ (जसमा पैसा खर्च हुन्छ)।
तर सामान्यतया मध्यम आकारले धेरै राम्रोसँग काम गर्दछ।
म्याangको नि: शुल्क बनावट
यस वेबसाइटमा तपाइँ बीचमा छनौट गर्न सक्षम हुनुहुनेछ यो होस्ट गरेको भन्दा image००० भन्दा बढि छवि फाइलहरू। वेबको धेरै पुरानो डिजाइन छ, तर यसको मतलब यो होइन कि यसको विकल्पहरूले तपाईंलाई गुणवत्ताका छैनन्, विपरित रूपमा।
तपाईं उनीहरूलाई बिभिन्न कोटीहरूमा विभाजित गर्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईलाई खोजिरहनु भएको फेला पार्न मद्दत गर्दछ।
फोटोशप बनावट: एरोवे टेक्स्चर
फोटोशप बनावटमा विशेषज्ञता, वेबले विभिन्न प्रकारका विभिन्न प्रकारका डिजिटल बनावटहरू होस्ट गर्दछ। अब, तिनीहरू स्वतन्त्र छैनन्। तिनीहरूसँग एक उत्कृष्ट गुण र समाप्त छ, तर तपाईंले उनीहरूलाई तिर्नु पर्छ।
तिनीहरूले तपाइँलाई अनुमति दिन्छ कम रिजोलुसनमा बनावट डाउनलोड गर्न विकल्प, तर केवल व्यक्तिगत प्रयोगको लागि। यसले तपाईंलाई तपाईंको प्रोजेक्ट स्केच गर्न मद्दत गर्दछ, र यदि ग्राहकले मनपराउँदछ भने यसलाई खरीद गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » पुनरावृत्त » बनावट » फोटोशप बनावट: जहाँ तिनीहरूलाई डाउनलोड गर्ने